Translator Newsletter: Rafitry ny atidoha, Famantarana hetsika sy maro hafa! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jona 2019 3:38 GMT
Miarahaba ny mpikambana ato amin'ny GV!
Tonga soa eto amin'ny fizarana Translator Newsletter! Androany isika dia hiresaka momba ny…
Rafitry ny atidoha
Pikantsary nalaina tao amin'ny www.wired.com
Amin'ny maha-olona miteny fiteny mihoatra ny iray, manana fotoana ahafahantsika mieritreritra voambolana manokana amin'ny fiteny iray isika rehetra, fa na dia miezaka mafy aza isika dia tsy afaka ny hieritreritra izany amin'ny hafa. Ankehitriny, misy ny fanazavana! Araka ny voalazan’ ity lahatsoratra ity ao amin'ny Wired, “Indraindray mifameno ny fiteny roa avy amin'ny mpahay fiteny roa,” hoy i Judith Kroll, psikôlôgy mandalina fiteny roa. Vakio ary lazao anay raha efa nitranga taminao izany!
Google Translate — ahitana fiteny 103 ankehitriny!
Pikantsary nalaina tao amin'ny googletranslate.blogspot.com.ar
Na dia fantatsika aza fa tsy manolo ny mpandika teny ny Google Translate, dia mety ho loharano lehibe izany rehefa mijery voambolana na fehezanteny. Vao haingana ny Google Translate no nanambara fa nampiditra fiteny vaovao 13 tamin'ny fifantenan'izy ireo, ka manome fahafahana ho an'ny olona vaovao 120 tapitrisa hampiasa io tolotra io! Ny fiteny vaovao dia ahitana ny Amharic, Scots Gaelic, Xhosa, ary hafa kokoa!
Famantarana ireo hetsika manerantany
Pikantsary nalaina tao amin'ny www.globalme.net
Amin'ny maha mpandika teny antsika, dia matetika isika miasa any an-trano ary tsy manana hirika betsaka hifandraisana amin'ireo namana matihanina amin'ny fiteny samihafa. Globalme nanam-potoana nanangonana ity lisitra misy ireo hetsika ho avy any amin'ny faritra manerantany ity. Jereo izany raha misy any amin'ny manodidina anao!
Mavitrika amin'ny sampana fandikan-teny
Pikantsary nalaina tao amin'ny friedmantranslation.com
Matetika tsy ho tena mahafinaritra ny miasa any amin'ny sampan-draharahan'ny fandikan-teny lehibe. Miresaka momba izay azon'ireo mpandika teny atao eny amin'ny sampan-draharaha lehibe mba hahazoana tombontsoa i David Friedman, mpandika teny Soedoà sy Alemà mankany amin'ny teny anglisy sady mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ny Mpandika Teny Amerikana sy Fikambanan'ny mpandika teny matihanina Soedoà. Ao amin'ny lahatsorany, ” “Ahoana no ahafahan'ny fahavitrihana hahamendrika bebe kokoa ny Tetikasa fandikan-tenin'ny sampan-draharaha,” iresahany ny zavatra rehetra manomboka amin'ny maodelin'ny mpamatsy tiana kokoa ka hatramin'ny fahazoana filazana mialoha ho an'ireo mpanjifa laharam-pahamehana. “Vakio raha te-hijery torohevitra bebe kokoa!